Macalin Klopp oo ka dhawaajiyay in wax xidigo muhiim ah aysan ka tagi doonin kooxda sidii horay u dhici jirtay. Muxuuse ka yiri qorshihiisa mustaqbalka? | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Macalin Klopp oo ka dhawaajiyay in wax xidigo muhiim ah aysan ka tagi doonin kooxda sidii horay u dhici jirtay. Muxuuse ka yiri qorshihiisa mustaqbalka?
Macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka dhawaajiyay in xidigaha muhiimka u ah kooxda aysan meelna u socon isla markaasna kooxda ka tagi doonin sidii ay waayadii ugu dambeysay sameeyeen.
Liverpool ayaa horay waxaa uga tagay xidigo muhiim u ahaa kooxda isla markaasna ahaa xidigo saameyn sare kooxda ku leh sida Xabi Alonso, Fernando Torres iyo Luis Sueraz balse klopp ayaa toogtaan sheegay ineysan arimo ceynkaas ah dhici doonin.
Macalin klopp ayaa yiri; “waxaa macquul ah in dhibta jirtay ee Liverpool heysatay ay midaas aheyd, markii ay heystaan koox heer sare ah mudo sanad kadib waxay kala aadi jireen daafaha caalamka, tani ma dhici doonto sanadkaan waan idiin hubaa”.
Dhanka kale Klopp ayaa laga wareystay qorshihiisa suuqa iyo hadii uu xidigo lasoo saxiixan doono wuxuuna ku jawaabay; “Ma doonayo inaan waxaan sameyn doono ka hadlo, laakiin uma maleynaayo in kooxdaani aan haatan heysano ay nagu qasbeyso inaan hanti fara badan suuqa galino”
Klopp oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri; “qaabka ugu fiican wuxuu yahay inaad lasoo wareegto koox xidigo ah kadibna aad si wadajir u hormariso isla markaasna ay mudo dheer isla joogaan( si ay isku fahmaan)”
Liverpool xidigaheeda ugu muhiimsan ayaa lala xiriirinayay qaar kamid ah kooxaha ugu tunka weyn qaarada yurub sida Barcelona, Real Madrid iyo Juventus hase yeeshee Klopp ayay u muuqataa inuu wararkaas meesha ka saaray
Previous: Sadio Mane oo ay macquul tahay inuu seego kulanka Fulham. Maxaa soo kordhay?
Next: Madaxweyne Farmaajo iyo dhiggiisa Ismaaciil Cumar Geelle oo wadahadallo ku yeesahy Villa Soomaaliya (sawirro)